"Somalia waa inay isbeddel ku sameysaa ciidamadeeda"
Soomaaliya waa inay dedejisaa isbeddalada ay ku sameyneyso ciidamadeeda, waxaa sidaas maanta yiri dalalka deeq bixiyayaasha kadib wada-hadal ay ka yeesheen horumarka gaaban ee laga sameynayo in ciidamada laga dhigo kuwo awood u leh inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab.
Sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters, Hadalkan kasoo baxay shir madaxeedka Brussels ayaa ku boorinaya dowladda Soomaaliya inay si deg deg ah uga shaqeyso wax ka qabashada arrimaha lagu cayimay warbixintii sanadkii tagey ay soo saareen dowladda, QM iyo Midowga Afrika.
Ciidamada Afrikan ah ayaa la billaabay in la dhimo sanaddii tagtay, waana kuwa inta badan la dagaalama maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarada ku haya Muqdisho iyo magaalooyinka kale.
Kuwa taxliiliya arrimaha amniga ayaa ka digaya in ciidamo xoogga oo Soomaali ah la’aantood ay Shabaab dib usoo noolaan karaan.
Deeq bixiyayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Soomaalida lagu diiwaan geliyo habka faraha la iska qaado, loona sameeyo mushaar bixin ku dhisan habka elektorooniga.
Hay’adda lacaga adduunka ee IMF ayaa ka shaqeyneysay in la sameeyo hab maamul wanaagsan oo maaliyaded, waxayna qirtay in dowladda Soomaaliya ay sameyneyso isbeddelo la isku raacay oo dusha lagala socdo.
“Diyaar ayaan u nahay in kormeer na lagu smaeeyo, IMF waxaan u furnay xisaabaadkeena” ayuu yiri Beyleh oo intaas ku daray “Waxaan sameyneynaa waxa loo baahan yahay inaan sameyno.